Nhau - Dombo-kubvisa maitiro muupfu chigayo
Muchigayo cheupfu, maitiro ekubvisa matombo kubva mugorosi anonzi de-dombo. Matombo akakura uye madiki ane hukuru hwakasiyana pane hwegorosi anogona kubviswa nenzira dzakareruka dzekuongorora, nepo mamwe mabwe ane saizi yakafanana negorosi anoda michina yekubvisa matombo.
De-stoner inogona kushandiswa nekushandisa mvura kana mweya svikiro. Kushandiswa kwemvura svikiro kubvisa matombo kunosvibisa zviwanikwa zvemvura uye hakuwanzo kushandiswa. Nzira yekubvisa dombo nekushandisa mweya svikiro inonzi yakaoma nzira dombo. Iyo yakaoma nzira parizvino inoshandiswa zvakanyanya muupfu zvigayo, uye yayo huru michina ibwe kubvisa muchina.
Destoner anonyanya kushandisa mutsauko mukumhanyisa kwekumiswa kwegorosi nematombo mumhepo kubvisa matombo, uye chikuru chinoshanda mashandiro ndiyo nesefa pamusoro pebwe. Munguva yebasa, iro rinobvisa dombo rinozunguzika mune yakatarwa uye rinounza mweya unokwira unopinda, uyo unoongororwa nemusiyano mukumiswa kwekumhanya kwegorosi nematombo.
Kusarudza maitiro muupfu hwegorosi chigayo
Mune furawa yegorosi yekuchenesa maitiro, iyo tsvina kusarudzika kunze iyo isina kusiyana negorosi mune mbishi zvigadzirwa nemusiyano murefu kana zviyo chimiro chinonzi kusarudzwa. Tsvina inobviswa pamidziyo yakasarudzwa inowanzo kuve bhari, oats, nzungu, uye madhaka. Pakati pezvisina kuchena izvi, bhari nemahazelnuts zvinodyiwa, asi dota raro, ruvara uye kuravira kune chakakanganisa chigadzirwa. Naizvozvo, kana chigadzirwa chiri cheupfu hwegiredhi repamusoro, zvinodikanwa kuseta sarudzo mune yekuchenesa maitiro.
Nekuti kukura kwesimbi uye kumhanyisa kumhanyisa kwetsvina dzakadai kwakafanana neya gorosi, zvinonetsa kubvisa kuburikidza nekuongorora, kubvisa matombo, nezvimwe. Naizvozvo, kusarudzwa inzira inokosha yekuchenesa kumwe kusvibiswa. Inowanzo shandiswa yekushandisa michina inosanganisira indent cylinder muchina uye wekusarudza mushini muchina.